तिथि मेरो पत्रु » Via राशिफल साइन चुम्बन गर्न कसरी
द्वारा एनआईसी Gaudette
Via राशिफल साइन चुम्बन गर्न कसरी
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: सेप्टेम्बर. 24 2020 |3मिनेट पढ्न
के तपाईं कसैसित छ पहिलो चुम्बनले एक नवोदित सम्बन्ध मा परम क्षण को एक छ, र केहि तपाईं को दुई सधैं सम्झना हुनेछ. तपाईं खराब पहिलो चुम्बनले छ भने, सामान्यतया कुनै पनि कि देखि मुक्त त्यहाँ छैन. तपाईं पहिलो पटक आफ्नो मिति चुम्बन गर्नुपर्छ कसरी हेर्न मा पढ्नुहोस्:
तपाईं पहिलो एक Aries चुम्बन गर्दा, तपाईं सामान्यतया सही पल को लागि पनि छिटो जाँदैछन् या प्रतीक्षा चिन्ता छैन. तपाईं तिनीहरूलाई चुम्बन गर्न चाहनुहुन्छ भने, बिना कुनै हिचकिचाहट यो के. तिनीहरूले तपाईं क्षण फाइदा उठाए र प्रत्यक्ष हुनुको कदर. यो तातो र भावुक बनाउन. तपाईं थाह हुनुपर्छ तापनि, तिनीहरूले शायद पहिलो तपाईं चुम्बन छौँ.
तपाईं पहिलो एक Taurus चुम्बन गर्दा, तपाईं प्रतीक्षा गर्न चाहनुहुन्छ. चाँडै यो के छैन, र चुम्बनले तातो र छिटो बनाउन छैन. यो चिन्ह ढिला जला रुचाउँछन्, त्यसैले यो अन्तिम बनाउन. तिनीहरूले अन्तस्करण लिने छैनन्, त्यसैले तपाईं गर्न आवश्यक छ. स्ट्रोक वा तपाईं आफ्नो ओठ चुम्बन पहिले उनलाई जा प्राप्त साँच्चै आफ्नो घाँटी चुम्बन.
तपाईं पहिलो एक मिथुन चुम्बन गर्दा, तपाईं पहिलो तिनीहरूलाई चुम्बन गर्न चाहनुहुन्छ भन्नुहुन्छ. यो चिन्ह शब्दहरू कुनै पनि अन्य भन्दा राम्रो जवाफ. आफ्नो कान मा seductively कानेखुसी, त्यसपछि यो मा कुतरना. आफ्नो हतियार खुरचना वा आफ्नो हात पकड (दुवै मिथुन शासन). केही Geminis पहिलो pounce हुनेछ, तर तिनीहरूले सामान्यतया सबै flirt र कुनै pounce छौं, त्यसैले तपाईं गर्नुपर्नेछ.
तपाईं पहिलो एक क्यान्सर चुम्बन गर्दा, उनीहरूले परम्परागत छौं र आरामदायी आँगन जस्तै थाह हुनुपर्छ, त्यसैले दरवाजे मा तारीख को अन्त मा गर्न. तपाईं तिनीहरूलाई चुम्बन गर्दा, तिनीहरूले सुरक्षित महसुस त आफ्नो काखमा पकड. यो धेरै लामो समय जान नदेऊ, र गन्दा हुन छैन.
तपाईं पहिलो एक लियो चुम्बन गर्दा, तपाईं गर्न सक्छन् यो रूपमा नाटकीय बनाउन. यो चिन्ह एक फिलिम जस्तै हुन जीवन चाहनुहुन्छ, र केहि पारंपरिक र पट्यारलाग्दो संग निराश हुनेछ. यो चाँदनी अन्तर्गत तिनीहरूलाई चुम्बन, यो घनघोर वर्षा मा, या सडक बीचमा. यो भावुक बनाउन र यो बाहिर आकर्षित.
तपाईं पहिलो एक कन्या चुम्बन गर्दा, पहिल्यै आफ्नो सास जाँच. तपाईं खाने गए भने, आफ्नो दाँत मा बिताएका छ पक्का केही गर्न जानुअघि बाथरूम मारा र तपाईं एक टकसाल पप वा mouthwash प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. कुनै कुराले बढी फोहोर मुख चुंबन भन्दा तिनीहरूलाई बन्द हुनेछ. तिनीहरूले साँच्चै आफ्नो सामान थाहा किनभने राम्रो प्रविधी अभ्यास.
तपाईं एक कुकुर संग एक केटी तिथि पर्छ किन
शीर्ष अमेरिकी शहरहरु एकल हुन
छ नियम तपाईं आफ्नो साथी गरेको पत्रु व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्न